Nahafaty olona roa ny fandehanana scooter teto an-drenivohitra nandritry faran’ny herinandro teo.
Ny voalohany dia tetsy Ambohimangakely izay niafara tao ambany kamiao ny mpitaingina ary maty tsy tra-drano. Ny faharoa kosa dia tetsy Iavoloha raha nandeha tamin’ny lalana tsy tokony ho izy ilay kodiaran-droa, nanao “sens unique” ary nifatratra tao ambany kamiao koa. Mamo ireo mpandeha. Naratra mafy izy roa ka ny iray no namoy ny ainy rehefa tany amin’ny hopitaly.
Tao Marovoay, olona efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana ary vao avy nosamborina no mbola nalain’ny olona ihany ary tsy namelany raha tsy tapitra ny ainy. Tany Antsirabe II, tao Sahanivotry indray dia nirohotra ny olona teny amin’ny biraon’ny zandary ary nangataka ny hamoahana ny olona izay nosamborin’izy ireo mba hovonoina. Soa fa efa natao ny fanolorana ny fampanoavana ireo olona fa raha tsy izany dia asa indray izay nitranga. Mirongatra ny fitsaram-bahoaka.
ZON’OLOMBELONA TSY VOAHAJA INTSONY
Nodorana velona ny roa lahy izay tratra nangalatra omby tao Ambohitsilaozana-Ambatondrazaka. Nafatotry ny olona ary teo imason’ny rehetra no natao ny fitsaram-bahoaka. Tsy nisy fisamborana taorian’izay ary dia samy nody fotsiny ny olona rehefa avy nijery ilay sarimihetsika tena izy sy mivantana. Tsy voafehy intsony ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara ary tena mihemotra tanteraka ny laharan’ny firenena amin’ny resaka fanajana ny zon’olombelona izay isan’ny takian’ny mpamatsy vola anefa.
HERISETRA ATAO AMIN’NY VEHIVAVY
Mivoaka ny isa fa 60%-n'ny vehivavy izay iharan'ny herisetra dia tsy sahy mitoroka sy mitory akory eny anivon’ny mpitandro ny filaminana, raha araka ny tatitry ny Unicef. Mbola mandefitra be ny vehivavy satria dimy isan-jato ihany no sahy mametraka fitoriana rehefa niharan’ny herisetra.
Nihena ny isan'ny trangana fitsaram-bahoaka tamin'ity taona ity, hoy ny zandarimaria. Na dia nalaza be aza ny fitsaram-bahoaka nahazo polisy tany Fenoarivo Atsinanana, 23 ireo tranga tamin'ity taona ity raha toa ka 51 tamin'ny taona lasa. Mbola antenaina hihena io isa io amin'ny taona ho avy raha mitohy ny fanentanana sy fampigadrana ireo tena tompon'antoka, hoy ny zandarimaria. Na izany aza, efa telo sahady no matin’ny fitsaram-bahoaka tamin’ny herinandro lasa teo.
FITSARANA RAHARAHA HAZO SAROBIDY
Hanomboka handray ny birao misy azy ireo ny mpitsara manokana izay hisahana ny fanadihadiana sy fitsarana momba ny fanondranana hazo sarobidy. Izay ihany koa vao tena mandeha ny fikirakiràna ireo dosie marobe. Raha tsiahivina dia tsy maintsy hovitain’izy ireo ao anatin’ny enim-bolana ny fitsaràna. Voakasik’izany ve ny mpitondra tamin’ny tetezamita izay efa fanta-poko fantam-pirenena fa nivelona tamin’ny fanondranana ?
FANAFIHANA TENY ALASORA
Lasa ny vola an-tapitrisany tao amin’ny villa iray tetsy Alasora. Nofatoran’ireo valo lahy mitam-basy sy manao saron-tava ny mpiambina ary nolavahan’izy ireo ny tamboho mba hahatafidirana tao an-trano. Tsy misy azo natao intsony fa dia nanaraka izay nolazain’ireo mpandroba sisa ny tompon-trano. Tsy nisy ny herisetra satria tsy nisy nanohitra nandritry ny fanafihana. Ny maraina vao tonga teny amin’ny mpitandro ny filaminana ny voatafika.